Serivisy casting casting China - Order online Die Casting Online - Minghe Casting
Teknolojia fandefasana maty tokana, fenitra iray: kalitao ara-potoana
Ny casting casting dia fomba fanariana marina izay mampiasa tsindry avo be hanerena ny vy metaly ho lasa lasitra vy misy endrika sarotra. Tamin'ny 1964, ny Japan Die Casting Association dia namaritra ny die casting ho "fomba fanariana izay manery ny firaka an-idina ho lasa bobongolo tsara amin'ny mari-pana avo lenta, ary ny masobe dia mamokatra marin-toerana avo lenta sy avo lenta ao anatin'ny fotoana fohy." Izy io koa dia fantatra amin'ny anarana hoe Pressure Die Casting. Ny tanjaky ny fitaovam-pitaovan'ireto fitaovana ireto dia saika avo roa heny noho ny firaka fanariana tsotra. Izy io dia miabo kokoa noho ny kodiarana fiara vita amin'ny aliminioma, zana-kazo ary faritra hafa izay te-hamokarana fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa. manan-danja.
Te-hanafohezana ny tsingerin'ny famokarana sy hampihena ny vidin'ny tetikasanao fototra? Teknolojia mandroso marobe mifangaro, ny Die Casting Services dia afaka manamora ny fizotry ny famokarana ary manafaingana ny famokarana andiana masinina betsaka, ary koa hahatratra ny haavon'ny haavo sy ny kalitaon'ny ora ara-potoana.
Ny serivisy fanariana maty maty dia amporisihan'ny tranombokin'ny milina Minghe be sy ny haitao amin'ny haavo maty. Vitsy no afaka mifanitsy amin'ny Minghe Casting amin'ny fanarahana ny famaritana mazava tsara, na amin'ny famoronana indray ny geometry sarotra ho an'ny famokarana avo lenta ny karazan-java-maniry manokana.
Fa maninona no misafidy serivisy famonoana maty any Sina?
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy tolotra matihanina haingana indrindra ao Shina, ireto fahaiza-manao fanariana manaraka ireto any Minghe dia misy hanomezana izay ilainao ny ampahany amin'ny fanariana maty, manomboka amin'ny famokarana betsaka ka hatramin'ny ampahany ary ny milina fanodinana fitaovana, hatramin'ny famokarana farany ampiasaina ny fenitra manara-penitra amin'ireo indostria mitaky be indrindra eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny fitaovan'ny zavakanto sy ny matihanina voaofana. Ny sasany amin'izy ireo dia misy:
ISO 9001: 2015 voamarina
Mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay
Fanarahana ny fepetra takiana amin'ny loharanon'ny DFARS
Fanarahan-dalàna henjana amin'ny PPAP sy Process FMEA ho an'ny mpanjifa fiara
Mahay amin'ny KanBan sy ny rafitra fitantanana kalitao sy fitadiavam-bokin'ny mpanjifa hafa
Na dia tena ilaina aza ny teknolojia avo lenta, dia fitaovana iray fotsiny io hanatratrarana ilay tanjona nitadiavantsika saina tokana nandritra ny 35+ taona: hanao izay azo antoka fa ny mpanjifa dia misafidy ny Minghe Casting ho mpamatsy tiany indrindra.
Matoky ny mpanjifa ny fahaizan'i Minghe hahita ny olana ateraky ny famokarana ary manolotra vahaolana hisorohana ny tavoahangy.
Ny fanolorana endrika tsara indrindra ho an'ny fanamboarana dia afaka manamboatra singa efa misy iray mba hampisondrotana ny hafainganan'ny famokarana sy hampihena ny vidin'ny singa. Minghe Casting dia loharano mety tsara amin'ny lahasa famoahana maty.
Azonao atao ny misafidy karazana serivisy famaranana metaly vita amin'ny milina aorinan'ny famolavolana milina ao amin'ny mpamokatra casting Minghe die hanatsarana ny fisehoan'ny faritra, ny malama, ny fanoherana ny harafesina ary ny fahombiazan'ny ampahany amin'ny fanariana maty.
Ny tombony azo avy amin'ny serivisy fanaovana casting Minghe Die
Amin'ny ankapobeny, ny milina mangatsiaka maty casting dia maty mandatsaka 50 ka hatramin'ny 90 isan'ora.
Ny milina fanariana fatina efitrano mafana dia famoahana 400 ka hatramin'ny 900 isan'ora.
Ny kilasy fandeferana ankapobeny amin'ny ampahany fanariana maty dia IT13 ~ IT15 amin'ny GB / T 1800-2009, ary ny marimarina kokoa dia mety hahatratra IT10 ~ W 1 1. Ny famaranana (Ra) dia 3.2 ~ 1.6μm, ary hatramin'ny 0.8μ eo an-toerana.
Toetra mekanika avo lenta fanariana maty
Ny hatevin'ny rindrina farany ambany amin'ny alim-bary alimina dia 0.5mm.
Ny hatevin'ny rindrina farany ambany amin'ny casting zinc dia mety hahatratra 0.3mm.
Ny ampahany amin'ny fitaovana hafa dia azo ampidirina ao anaty casting casting - Ny fasteners na ny inserts dia azo ampidirina ao amin'ilay singa farany. Ka mamonjy vidin'ny fitaovana sarobidy sy ny vidin'ny fikarakarana.
Ny fanadihadiana momba ny raharaha Minghe momba ny famoahana ho faty
Safidio ny serivisy fanariana Die tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanariana maty dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa famoahana maty.